Kenya ma waxay u baahan doontaa Somaaliya, xukunka maxkamadda ICJ kaddib? – Mudug.com
Kooxdan ayaa mas’uuliyiinta Kenya ugu baaqay inay nidaam diblomaasiyadeed adeegsato, si loo ilaaliyo nabadda iyo xasilloonida biyaha dhinaca galbeed ee badweynta Hindiya.
Kulan ay khubaradan yeesheen oo ay Jimcadii Nairobi ku qabatay hay’adda Policy Institute ayaa lagu sheegay in haddii Kenya ay ku guul darreysato kiiska maxkamadda hor yaalla ay noqon doonto waddan aan wax bad ah lahayn, ayna dalalka Soomaaliya iyo Tanzania ka baryi doonto inay usoo fasaxaan maraakiibta ku xiranaya dekedda Mombasa.
Khubaradan oo ka kala socday hay’adaha ka howl gala arrimaha badaha ayaa sheegay inuu wali jiro xal loo heli karo muranka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya.
Image captionKhariidadda muranka badda Kenya iyo Soomaalia
Somaaliya ayaa markaas kadib Iyana amar ku siisay dhammaan hay’adaha aan dowliga ahayn ee ka howl gala Kenya ee fuliya howlaha ku saabsan Soomaaliya inay u guuraan magaalada Muqdisho.
Image captionXiriirka Kenya iyo Soomaaliya oo meeshii ugu xumeyd gaaray
“Kenya qalad weyn oo diblomaasiyadeed ayay gashay. Labada dal xiriir weyn oo diblomaasiyadeed ayaa ka dhaxeeya, ciidaan nabad ilaalin ayaa Kenya ka jooga Soomaaliya; inay heerkaasi gaarsiiso arrinta waa Khalad diblomaasiyaadeed. Sidaasi waxaa BBC-da u sheegay Ambasadar Ciid Badal oo horay u soo noqday safiirka Soomaaliya ee Qaramada Midoobay.
“Sharci ahaan, Kenya way ku sax sanaan kartaa, sababtoo ah horay ayay Kenya ceelal shidaal oo badda ah u bixixsay. Soomaaliya way ka dacwootay oo maxkamadda caalamiga ayay tagtay, waxayna tiri Kenya waxay kusoo xad-gudubtay baddeenna oo waxay ka baareysaa shidaal, maxakamaddii way dhageysatay oo dacwadii way socotaa, haddaba haddii Soomaaliya ceelashii ay geysay London, sharciyan Kenya way sax sanaan kartaa “. Ayuu raaciyay Ciid Badal.
Xiisadda Kenya iyo Soomaaliya ayaa cirka isku sii shareertay bilihii lasoo dhaafay, iyadoo hadda xaaladdu u muuqato inay meeshii ugu xumeyd gaartay.Go’aanka maxkamadda caddaaladda ee ICJ ay kasoo saareyso dacwadda ku saabsan muranka badda ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya ayaa la filayaa inuu soo baxo bisha Sitembar.